अध्यात्मको बाटोमा- १८ , अध्यात्म के हो ? – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
May 1, 2020 Spiritual
अध्यात्मको बाटोमा- १८ , अध्यात्म के हो ?अध्यात्म भनेको अन्त्यन्त फराकिलो संभावना बोकेको अवधारणा हो । जसले हामी भित्र भएका कुनै ठुलो भन्दा पनी ठुलो भावानात्मक अन्तरसंबन्धलाइ समाबेश गर्दछ । जहाँ मानिसहरुलाइ जीवनको अर्थ खोज्न बाध्य बनाउछ । अध्यात्म भन्ने बिषयबस्तु एउटा बिश्वब्यापी सर्बमान्य मानव अनुभूति हो । संसारका मान्छेलाइ यो बिषयबस्तुले अन्तत छोएरै छोडछ । आध्यात्मिक अनुभव मानव जीवनको पबित्र पारमार्थिक गहिरो भावनासंगको अन्तरसम्बन्धलाइ नै अध्यात्म हो भनेर व्याख्या गर्न पनी सकिन्छ । यो बिराट स्वरुप ब्रह्माण्ड, जगत र जीवनको खोज नै आध्यात्म हो । जो पदार्थ भन्दा टाढा छ । जो मान्छे र जीव भन्दा पर छ, जो बनस्पति भन्दा पर छ तर पनी यी सम्पूर्ण चिजसंग अन्तरसम्बन्ध छ ।
मन्दिर जानु, तिर्थजानु, पुजाआज्ञा गर्नु भनेको धर्म संस्कृति हो । त्यो अध्यात्म होइन । मुक्त पुरुषहरु कुनै बाद र धर्ममा बाधिन्न । मानिसहरुले नजान्दा नजान्दै पनी मठ, मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुव्दारा पुगेर प्रार्थना गर्न चुकेका छैनन । त्यो भनेको मान्छेले आफूभित्र अबस्थित अध्यात्म जो प्रकट भएको छैन, हो होइन भन्ने भ्रम पनी छ । तर पनी हामीले प्रचलित धर्मलाई मान्दा अध्यात्मिक भइन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छौ । धार्मिक मान्छे नै आध्यामिक हो भन्ने हाम्रो मान्यता पनी हो । जब आफुले हासिल गरेको पदार्थीय सुखबाट असन्तुष्ट बैराग उत्पन्न हुन्छ । तब परम आनंद, आत्मशान्तिको खोजी गर्न चाहन्छ । आफुलाइ जान खोज्दछ ।
एउटा मान्छे तब आध्यामिक बन्न सक्छ, जसले आफुलाई चिन्न सक्छ, प्रेम गर्दछ र समस्त चराचर प्राणी जगत र ब्रह्माण्डको भलो गर्दै प्रेम गर्न सक्दछ । जसको चेतना उन्नत छ, सचेत रुपले समस्त जगत र जीवप्रती प्रेम सम्मान र सदभाव राख्दछ । जो सत्यको लागी अटल रहन्छ । प्रकृति पदार्थ, भौतिक सम्पदा भन्दा माथी उठेर पराभौतिक परब्रह्मको परमशक्तिलाइ स्वीकार्छ । जो धर्म, जाति, सम्प्रदाय, राष्ट्र भन्दाको माथी रहेको चेतनशिल मुक्त पुरुष नै आध्यामिक व्यक्तित्व हुन् सक्दछ ।
यो संसार परमाणुबाट बनेको छ । अर्थात हरेक बस्तुको शुक्ष्मरुप भनेको परमाणु ( atom) हो । प्रत्येक परमाणु धनात्मक (positive ) र ऋणात्मक (negative) विद्युतीय शक्तिको एकरुप हो । यसमा असिमित शक्ति छ, परमाणुको केन्द्र (neucleus ) मा रहेको अन्त्यन्त शुक्ष्म अन्तरंग परमाणु ( protons ) र (neutrons) अतिशुक्ष्म बिद्युतपरमाणु ( electrons ) ले चारैतिर अति बेगका साथ् घुमिरहेका हुन्छन जसको गतिले बिद्युत किरण (radiation) उत्पन्न हुन्छ । बैज्ञानिकले अहिले सम्मको सबभन्दा रहस्यमय र शुक्ष्म रुपको खोज गरेका थिए । बिज्ञानले संसारमा घटित परिणामलाई मात्र उजागार पार्न सक्दछ । बैज्ञानिकहरुले भौतिकशास्त्रको अनुसन्धान गरे, भौतिक बस्तु ठुलो भन्दा ठुलो र सानो भन्दा सानो बस्तुको गुण बत्तालाइ अध्ययन गरेर व्याख्या गरे तर उनीहरु हैरान भए यो संसार भौतिक पदार्थ मात्रै हैन । जहा physics मात्रै हैन यहाँ त त्यो भन्दा पर metaphysics पनि छ भनेर स्विकार गर्न बाध्य भएका छन । यस्तो आश्चार्यजनक, यसमा भएका शौन्दर्यता, विशिष्टता के प्रयोजनका लागि छन, बस्तु र प्राणि जगतसंगको अन्तरसम्बन्ध कसरी जोडिएको छ । यो आकाश, यी शौर्य मण्डल, तारा मण्डल, यो हावा, यी बनस्पति के प्रयोजनको लागी हो र यो सबैको ब्यबस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा बताउन पनि दुनियालाइ सकस भैरहेको छ भने यो कसले नियन्त्रण र ब्यबस्थापन गरेको छ ? भन्ने कुरा कसैले दिन सक्दैन । मान्छेले एउटा घर चलाउन त घरमुली चाहिन्छ भने यो त ब्रह्माण्ड हो ।
माटो त्यहि हो त्यसमा करेला फल्यो भने तितो फल्छ । सुन्तला फले गुलियो हुन्छ, खुर्सानी फले पिरो । यी तितो गुलियो पिरो कसले हालिरहेको छ । हातले छुदा न गुलियो हुन्छ न पिरो न तितो अनि मान्छेको जिब्रो नै किन चाहिन्छ ? बिज्ञानले करेलालाई गुलियो बनाउन सक्दैन, न त खुर्सानिलाई गुलियो । माटो उही हो तर त्यसले ति फललाई भिन्दा भिन्दै स्वाद कसरि माटोबाट प्राप्त भैरहेको छ । ति फरक बिज बिजन के का लागी बनाइएका हुन् ? अति रहस्यमय छ । हरेक अति सुक्ष्म बिजमा ति सबै तत्वगुणको कसले सृजना गर्यो ? त्यसको जवाफ कसैले दिन सक्दैन । यस पृथ्बीमा उत्पत्ति भएका जीव प्राणी पशु पंक्षी, किट पतंग, सम्पूर्ण बनस्पतिका गुण दोष एक अर्कामा एकदमै फरक भएर पनी जगत र जीवनसंग बाधिएका छन् । अर्थात एकअर्कामा आश्रित छन् । कहीं न कहीं त्यसको सम्बन्ध जोडिएको छ ।
यो कसले बनाइ राखेको छ । म यस धर्तीमा आउनुको वजह के हो ? र म को हूँ ? लगभग सबै मान्छेको जीवन खाना, यौन क्रियाकलाप तथा सन्तान उत्पादन गर्ने, भौतिक सुख सुबिधा जुटाउदैमा समाप्त हुन्छ । अर्थात मानौ उ जन्मेको भोजन र यौन भोगको लागी हो ! संसारमा यस्ता केहि मानिसहरुको पनी जन्म हुन्छ । जसले यो धर्तिलाइ कसरि जोगाउने हो ? चिन्तन गर्छ । संसारमा मानवता कसरी कायम गर्ने हो ? चिन्तन गर्छ । संसारको बातावरण बिग्रेकोमा चिन्ता गर्छ । प्रकृतिमाथी भएको अतिक्रमण रोक्न आह्वान गर्दछ । संसारमा भएका जिबजन्तु नाश हुन् लागेकोमा पिर गर्दछ । कसैलाई भोको र दुखि देख्न चाहन्न । सबै सुखी होउन भन्ने कामना गर्दछन “सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद्दु:खभाग्भावेत्”। सबै सुखी रहुन कसैलाई दुखको नजर पनी नलागोस भन्छ ।
मानिसले आध्यात्मिकतालाइ अनुशरण गर्ने हो भने श्रेष्ठ पुरुष बन्न सक्दछ । जसले प्रकृतिको सुन्दरताको आंकलन गर्न सक्दछ । जसले जगत र जीवनलाई बुझ्दछ । जसले आफु, आफ्नो र अर्कोलाई समान प्रेम गर्न सक्दछ । जसका हृदयमा सत्यको बास हुन्छ र सदा सर्बदा सत्यको पक्षमा उभिन्छ । जस्तो सुकै परिस्थतिमा पनी बिचलित हुदैन । जसले आत्मा र परमात्मासंगको नाता महसुस गर्न सक्दछ । जसमा घमण्ड, अहंकार, अभिमान, इर्श्या, लोभ, लालच, उच, निचको भावना हुदैन । जसमा मान सम्मानको अभिलाषा रत्तिभर हुदैन । ति व्यक्ति अध्यात्मिक हुन भनेर भन्न सकिन्छ ।
त्यसैले धर्म अध्यात्म होइन, तर पनी मन्दिरमा जाने पुजा आज्ञा गर्ने मान्छेलाई आध्यामिक भनिराखेका छौ । धर्म भनेको सम्प्रदाय हो । एउटा आस्था बोकेको मजबुत सामाजिक संगठन हो । यहाँ त हामीले त्यो धार्मिक संगठन रुपी अण्डालाइ तोडेर संसारमा पदार्पण मान्छेलाई नै भगवान बनायौ । र उनैको नाममा धर्मको नाम दियौ । बुध्द हिन्दु धर्मरुपी अण्डामा थिए अर्थात उनको सस्कार त हिन्दु थियो । उनका माता पिता हिन्दु थिए । त्यो चौघेरारुपी हिन्दु अण्डा फोडेर बाहिर आए । ति मुक्त पुरुष हुन, उनले मुर्ति पुजा गर्न पर्छ भनेका होइनन तर आज हेर्नुस, उनैको मुर्ति पुजा गरेर उनको नामको धर्म स्थापना भएको छ । उनैलाई भगवानको रुपमा पुजा गरिराखेका छन, । त्यस्तै यसुले जुडिज्म रुपी धार्मिक अण्डालाइ फोडेर बाहिर आए । अर्थात कथित धर्मबाट मुक्त भए, ति मुक्त पुरुषले फेरी कसैलाई धर्मको नाममा एउटा परिधि बाँधेर धर्मको स्थापना गरेको होइन । उनले धारको नाममा भएको शोषणको बिरोध गरेका थिए । धार्मिक उन्मुक्ति खोजेका थिए । तर समाजले उनैलाई भगवान मानी मुर्तिमा कैद गरेर राखे । त्यहि सत्यको खोज गरेर अन्डारुपी बन्धनलाइ जो बाहिर निसकन सक्दछ त्यो आध्यामिक मुक्त पुरुष हो । धर्म र अध्यात्ममा यहि फरक छ ।
अध्यात्मको बाटोमा १९ -बिचार शक्ती के हो ?